Hlola i-Singapore - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eSingapore
Okufanele ukwenze eSingapore.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseSingapore
Bukela ividiyo nge-Singapore
Hlola iSingapore izwe ledolobha eSoutheast Asia. Yasungulwa njenge koloni lokuhweba laseBrithani e1819, selokhu inkululeko yaphenduka elinye lamazwe achuma kakhulu, anentela futhi aduma kakhulu echwebeni elixakeke kakhulu emhlabeni.
Kuhlanganisa imigwaqo emincane nemigwaqo engaphansi yedolobha lesimanje, elinothile nethonya lezithonya zaseChina, iMalay kanye nezaseNdiya kanye nesimo sezulu esishisayo, ukudla okumnandi okuvela ezikhungweni zama-hawker, ezitolo ezinkulu zezitolo kanye nasendaweni yokuphila yempilo yasebusuku, leGarden City yenza okuhle isitobha noma isikebhe esifundeni.
I-Singapore ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu zokuvakasha emhlabeni ngenxa yezizathu eziningi, enye yazo yizidingo zokuhamba kancane.
I-Riverside (i-Civic District) - Umgogodla wamakholoni waseSingapore, oneminyuziyamu, izifanekiso ezibunjiwe kanye nezinkundla zemidlalo, singasasho izindawo zokudlela, imigoqo kanye namakilabhu.
U-Orchard Road - umgwaqo omkhulu wamakhilomitha angu-2.2 onezitolo eziningi zezitolo.
IMarina Bay - isici esisha kakhulu seSingapore, esiphethwe yiMarina Bay Sands resort integrated Resort neMarina Barrage. Izingadi ezisanda kuvulwa yiBay ingadi yomphakathi enkulu eneqoqo leMithi Emikhulu yamaSuper.
I-Bugis neKampong Glam - I-Bugis neKampong Glam ziyisifunda esidala saseMalawi, manje esithathwa kakhulu ngokuthenga
IChinatown - le ndawo ibikade iqokelwe ukuhlala amaChina ngabakwaRaffles, manje okuyindawo yamagugu aseChina ethandwa izivakashi.
I-Little India - Ucezu lweNdiya oluya enyakatho enkabeni yedolobha.
IBalestier, Newton, Novena neToa Payoh - Indawo yokuhlala isabelomali namathempeli waseBurma ngaphakathi kwebanga eliya phambili lesikhungo.
Enyakatho - ingxenye esenyakatho yesiqhingi, eyaziwa nangokuthi iWoodlands, yakha indawo yokuhlala nezindawo zezimboni zaseSwitzerland. I-Singapore Zoo itholakala lapha.
West - Ingxenye esentshonalanga yesiqhingi yakha izindawo zokuhlala zaseSingapore nge Star Vista.
IJurong— Ikhaya laseNanyang Technological University kanye nomngcele wokugcina wezindlu ngaphambi kwendawo yezimboni. Ezokuvakasha zihlanganisa iSingapaki bird Park, iSayensi Yezikhungo Zesayensi kanye neSikhungo Sokutholwa KweSingapore.
ENorth East - Ikhaya emadolobheni amaningi okuhlala anenhliziyo yeSerangoon NEX, iHougang Mall neCompass Point
Ama-Tampines - idolobhana elihlala ezindaweni ezinama inhliziyo, empumalanga ekude nesiqhingi esiseduzane ne Changi Airport.
I-East Coast - ingxenye esempumalanga yesiqhingi ehlala abantu abaningi iqukethe iChangi Airport, amamayela namakhilomitha ogwini kanye nama-eateries amaningi adumile. Futhi ihlanganisa uGeylang Serai, ikhaya langempela leMalys yaseSingapore.
ISentosa - isiqhingi esihlukile uma inqaba yamasosha yathuthuka yaba indawo yokuphumula, iSentosa iyona esondele kakhulu iSwitzerland efika eDisneyland, manje enendawo yokugembula kanye ne-Universal Studios.
INorth West - isifiso esenyakatho nentshonalanga esingena emahlathini angafakwanga, nezindawo zokuqeqeshelwa ezempi (Ama Keng, Lim Chu Kang, amathuna, iKranji Camp neSAFTI).
I-Singapore yi-microcosm yase-Eshiya, enabantu abaningi base Malay, ama China, amaNdiya, neqembu elikhulu labasebenzi kanye nabahambi abavela kuwo wonke umhlaba.
I-Singapore inedumela elifanelwe ngokuqagela okuyisidina okuthole ukuthi ichaze amagama anjengokuthi "Disneyland kaWilliam Gibson ngesigwebo sentambo" noma "okuwukuphela kwendawo yezitolo enesihlalo e-United Nations". Noma kunjalo, iSwitzerland ye-Asia yenzelwe abaningi ukuthola ubuphofu, ukungcola, kanye nezinxushunxushu eziningi zezwe laseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, futhi uma ukhahlela ngaphansi kwendawo ehlanzekile futhi usuka emzileni wezivakashi kungekudala uzothola okuningi kunokuhlangana iso.
Ukudla kwaseSingapore kunenganekwane, nezindawo eziphithizela ama-hawker nezitolo zekhofi zehora le-24 ezihlinzeka ngokudla okushibhile okuvela kuzo zonke izingxenye ze-Asia, futhi abathengi bangaphanga izibonelelo zabo zemithwalo ezindaweni zokuthenga njenge-Orchard Road kanye ne-Suntec City. Eminyakeni yamuva eminye imikhawulo yezenhlalo nayo seyikhululekile, manje usungagxuma futhi udansele eziqongweni zamabha ubusuku bonke, yize utshwala busabiza kakhulu kanti nezinsini ezingenahlafunwayo zingathengwa kuphela ekhemisi ukuze zisetshenziselwe ukwelashwa.
Izakhiwo ezimbili zamakhasino - noma "Izindawo zokudidiyela ezihlanganisiwe", ukusebenzisa i-euphemism yaseSingapore - zivulwe e-2010 eSentosa naseMarina Bay njengengxenye yeDrayivu entsha yokuzijabulisa nokuzijabulisa yaseSingapore, inhloso yokuphinda kabili isibalo sabavakashi abavakashela futhi bandise ubude besikhathi bahlala ngaphakathi kwezwe.
ISingapore iyaziqhenya ngokuba yizwe elinobuhlanga obuningi, futhi inamasiko ahlukahlukene naphezu kosayizi wayo omncane. Iqembu elikhulu kunawo wonke amaShayina, akha i-75% yabantu.
Phakathi kwezikhulumi zaseChinese, iSouthern Min / Min Nan (Hokkien-Taiwanese) nesiCantonese yizindawo ezingaphansi kakhulu, kanti neMandarin isebenza njenge-lingua franca yomphakathi. Amanye amaqembu “olimi” olwaziwayo phakathi kwamaShayina afaka iHakkas neFuzhounese. Kukhona futhi nokuqina okukhulu kwezwe laseChina ezweni laseSwitzerland ngemuva kokuthi uhulumeni waseSingapore evule inqubomgomo yokufudukela ezweni laseChina kusukela ezwebeni China iqale ukuguqula kabusha kwezomnotho kusukela kuma-1980s, okuholele ekufikeni kwamanani amakhulu okufika kwabantu abavela ezweni laseChina kuya eSingapore phakathi nekhulu le-20th. AmaShayina amakhulu ezweni laseSingapore akhuluma isiMandarin.
UMalay, owakhiwa izizukulwane zezakhamizi zokuqala zaseSingapore kanye nabafuduki kusukela manje Malaysia, I-Indonesia neBrunei, bakha cishe i-14% yabantu.
AmaNdiya akha cishe i-9% yabantu. KumaNdiya, amaTamil enza iqembu elikhulu kunawo wonke, yize kukhona inani elikhulu lezikhulumi zezinye izilimi zamaNdiya ezifana nesiHindi, isiMalayalam nesiPunjabi.
Izinsalela zingumxube wamanye amasiko amaningi, ikakhulukazi ama-Euro angabomdabu waseYurophu nabase-Asia futhi idlanzana leBurmese, iJapan, iThais nabanye abaningi. Kancane kancane kwengxenye eyodwa kwezintathu yezakhamizi zaseSingapore akuzona izakhamizi.
Isimo sezulu saso sivame ukushiswa ilanga ngaphandle kwezinkathi ezihlukile. Imvula iwela cishe nsuku zonke unyaka wonke, imvamisa ngokuzumayo, imvula enkulu enqabileyo ehlala isikhathi esingaphezu kwehora. Kodwa-ke, iningi lemvula likhona ngesikhathi semvula yasenyakatho (ngoNovemba kuya kuJanuwari), ngezikhathi ezithile okubandakanya imvula ende. Ukuduma okubabazekayo kungenzeka unyaka wonke, nganoma yisiphi isikhathi phakathi nosuku, ngakho-ke kuwukuhlakanipha ukuphatha isambulela ngezikhathi zonke, zombili njengethunzi elivela elangeni noma ikhava yemvula.
ISwitzerland ibamba imicimbi eminingi unyaka ngamunye. Eminye yemikhosi kanye nemicimbi yayo edumile ibandakanya iSingapore Food Festival, iSwitzerland Grand Prix, iS Singapore Arts Festival, iCingay Parade, iWorld Gourmet Summit neZoukOut.
I-Ultra Singapore Musical Festival ngomunye umkhosi odumile eSingapore. UKhisimusi ubuye ugujwe kabanzi eSingapore, inkathi lapho imigwaqo yedolobha nezitolo ezinkulu zemigwaqo eduze kwebhande layo elidumile lokuthenga i-Orchard Road zibekwa zigqotshwe ngemibala egqamile.
Ngaphezu kwalokho, iSuan Jewel festival iheha izivakashi eziningi unyaka nonyaka, futhi ingumbukiso wamagugu ayigugu, ubucwebe obudumile nobucwebecwebe abavela kwamanye amatshe ayigugu nabaqambi bamazwe.
IsiMalay singafakwa kuMthethosisekelo njengolimi lukazwelonke, kepha kulona ulimi oluvame kakhulu sisiNgisi, esikhulunywa cishe yiwo wonke umuntu waseSingapore ongaphansi kweminyaka engu-50 ngamazinga ahlukahlukayo okushumayeza. IsiNgisi sikhulunywa kangcono lapha ukwedlula komakhelwane abaningi base-Asia. IsiNgisi futhi siyindlela yokufundisa ezikoleni, ngaphandle kwezifundo zolimi lwebele (isib. IsiMalay, isiMandarin nesiTamil), ezibuye zifunwe esifundweni ngabaseSingapore. Ngaphezu kwalokho, zonke izimpawu nezincwadi ezisemthethweni zibhalwe ngesiNgisi, imvamisa zisebenzisa isipelingi saseBrithani.
Ezinye izilimi ezisemthethweni zaseSingapore ziyisiMandarin Chinese nesiTamil. IsiMandarin sikhulunywa ngabaningi abakhulile nabaphakathi kweminyaka baseSingapore abangamaShayina ngenkathi iningi labaseShayina abangamaShayina abaningi bekhuluma isiNgisi futhi kwesinye isikhathi isiMandarin Chinese yize ubuchwephesha nobungako besiMandarin Chinese buhlukahluka phakathi kwabaseSwitzerland abaseShayina abancane ngenxa yokubusa okwandayo kokusetshenziswa kwesiNgisi kuhulumeni, ezemfundo. nezindawo zokusebenza eSingapore kanye nokuntuleka kokugcizelelwa kwemfundo yaseMandarin ezikoleni zaseSingapore eminyakeni eyishumi edlule.
Amabhishi nezindawo zokuvakasha: Yiya kwelinye lamabhishi amathathu eSentosa noma eziqhingini eziseningizimu. Amanye amabhishi angatholakala e-East Coast.
Isiko kanye nokudla: Bheka iChinatown ngokudla kwamaShayina, i-Little India yokunambitheka kwaseNdiya, iKampong Glam (i-Arab St) ngesipiliyoni seMalay / Arab noma i-East Coast yokudla kwasolwandle okumnandi, kufaka phakathi upelepele odumile nopelepele omnyama.
Umlando kanye neminyuziyamu: Indawo yeBras Basah empumalanga ye-Orchard kanye nenyakatho yoMfula iS Singapore ingumgogodla wamakholoni eSwitzerland, enezakhiwo zomlando kanye neminyuziyamu. I-NUS Museum entshonalanga nayo ilufanele kakhulu lolu hambo.
Imvelo nezilwane zasendle: Izindawo ezithandwayo zabavakashi iSingapore Zoo, Night Safari, Jurong bird Park kanye neBotanical Gardens konke kuseNyakatho naseNtshonalanga. Ukuthola imvelo "yangempela" kunzima kakhulu, kepha iBukit Timah Nature Reserve (etholakala esifundeni esifanayo ne-zoo) inezinhlobo zezitshalo eziningi kunalezo eziseNyakatho Melika. IPulau Ubin, isiqhingi esisedolobhaneni elisuka eSigodini saseChangi empumalanga, iyidonsa ngendiza ebheke eSpain yasemakhaya yamuva. Amapaki amadolobha agcwele abagijimayo bendawo noma enza i-tai chi angatholakala yonke indawo. Bheka futhi indawo engcwele yezifudu kanye ne-turtle engcwele e-Chinese Gardens entshonalanga nedolobha ngempelasonto enhle nalezi zidalwa ezinhle.
Amapaki nezingadi: IGarden City nedolobha eliseGadini kukhona imiqondo emisha ethuthukiswa uhulumeni waseSoviet futhi abantu baseSingapore baziqhenya kakhulu ngamapaki abo nezingadi zabo. Qiniseka ukuthi uvakashela iBotanical Gardens (kufaka phakathi iNational Orchid Garden) kanye neZingadi eziseBay (ungaphuthelwa yi-Flower Dome ne-Cloud Forest). Kukhona neHortPark ku- "Southern Ridges" kanye ne- "Chinese" kanye ne "Japan Gardens".
Ama-skyscrapers kanye nezitolo: Inxanxathela yezitolo ebiza kakhulu isemgwaqweni u-Orchard Road, kuyilapho ama-skyscrapers ehlanganisiwe azungeze uMfula iSingapore, kodwa futhi ahlole iBugis neMarina Bay ukubona ukuthi abakwaSuran bathenga kuphi.
Izindawo zokukhulekelwa: Ungaphuthelwa yilesi sici se-Singapore, lapho ubuBuddha, ubuTao, ​​ubuHindu, ubuSikhism, ukholo lwe-Baha'i, ubuKristu, ubuSulumane kanye nobuJuda buvele khona ngamanani amakhulu. Izindawo zenkolo zingavakashelwa kalula futhi zamukele okungebona abalandeli ngaphandle kwezikhathi zenkonzo. Okubaluleke kakhulu ukuvakashelwa kufaka phakathi: iHong Kong Meng San Phor Kark See Monastery eduzane nase-Ang Mo Kio, ithempeli laseSri Mariamman Hindu elinemibalabala eChinatown, ithempeli lamaBuddhist lamaBuddha eliseBalestier, elinye lamathempeli amadala weTokan Hock Keng nethempeli leMasjid. I-Sultan ku-Arab Street.
Ngenkathi ungathola indawo yokuzijwayeza cishe noma yimuphi umdlalo eSpain - igalofu, ukusebenzisa i-surfing, ukushona kwe-scuba, ngisho nokushwibeka eqhweni nokushushuluza eqhweni - ngenxa yobukhulu bezwe elincane izinketho zakho zilinganiselwe futhi amanani entengo aphakeme kakhulu. Ngokuphathelene nemidlalo yamanzi, imizila yokuhambisa imatasa nengcindezi yokuphakama kwenani labantu kusho ukuthi ulwandle oluzungeze iSwitzerland luyindilinga, futhi iningi labantu bendawo liya phezulu eTioman (Malaysia) noma eBintan (Indonesia). On the sibheke phezulu, kukhona inqwaba yezitolo dive e Singapore, futhi bavame ukuhlela uhambo ngempelasonto ezindaweni ezinhle dive off the East Coast of Malaysia, ngakho-ke inketho enhle yokufinyelela ezinye izingosi zeMalaysia ezingahambeli kangako ukuvakasha.
ISingapore ingaba yizwe elincane kepha inendawo eqhubekayo eveza ubuciko ethinta amathonya ayo kusuka kulamagugu ayo ahlukile amasiko aseMpumalanga kanye naseningizimu mpumalanga ye-Asia, ngokuhlanganiswa okuhle kokuthinta kwasentshonalanga.
I-Renaissance City Project yasungulwa e-2000 nguHulumeni wase-Singapore ukusungula iSingapore njengedolobha lesifunda kwezobuciko ukuhlakulela intshisekelo yezobuciko namasiko. Namuhla, iSingapore izibona ichuma esigabeni sesithathu sephrojekthi yedolobha yokuvuselela iminyuziyamu emisha, imidwebo yamazwe omhlaba kanye nemikhuba yezobuciko ingena kumhlaba wobuciko bendawo.
E-2011, eSingapore yabona kuvulwa iMnyuziyamu we-ArtScience eMarina Bay Sands, imnyuziyamu enikezwe ukuklama nobuchwepheshe. Futhi e-2012, kwafika imidwebo yamazwe omhlaba eyishumi nane ogwini lweSyria oluhlala eGillman Barracks, indawo entsha yezobuciko. Igalari Yezwe Yesizwe evulwe e-2015, futhi yafakwa ezikhumbuzweni ezimbili zikazwelonke - eyake yaba yiNkantolo Ephakeme Yokwakha neCity Hall, iyisikhungo sobuciko esikhulu kunazo zonke eSwitzerland futhi esinye sezindawo ezinkulu kunazo zonke esifundazweni, esigxile kubuciko besimanje baseNingizimu-mpumalanga Asia ngamaqoqo ayo.
Isifunda sezobuciko saseSingapore, esisendaweni ezungeze iDhoby Ghaut kanye neCity Hall indawo inenqwaba yezikhungo zobuciko, iminyuziyamu nemipheme. Iminyuziyamu ephawuleka nezindawo zobuciko zifaka, iMnyuziyamu Kazwelonke WaseSingapore, iSwitzerland Museum Museum, Isigcini (isikhungo sokuqala sobuciko esizimele sangaphambilini saseSingapore) neArt Plural Gallery, igalari yobuciko enkulu kunazo zonke yaseSingapore.
Ngasohlangothini lwamasiko wezinto, iSingapore ibilokhu izama ukususa idumela layo elidabukisayo, elingenankinga nokuheha abaculi abaningi nokwenza imisebenzi ethile. Inkanyezi esibhakabhakeni samasiko eSwitzerland yinkundla yemidlalo yeshashalazi yase-Esplanade eMarina Bay, indawo esezingeni lomhlaba jikelele yokwenza ubuciko kanye nesiteji esijwayelekile seSingapore Symphony Orchestra. Izinketho zesiko le-pop zikhula ngokushesha futhi ubuchwepheshe obukhuliswe ekhaya laseSingapore buyenziwa kabusha okwesibili, ngezenzo zolimi lwasekhaya lwesiNgisi. Noma imaphi amabhendi nama-DJs ahambela i-Asia nawo aqinisekisiwe ukuwenza eSingapore.
Ukugembula - igalofu - izinhlanga - ukubhukuda - imidlalo yezamanzi - ukudoba eSwitzerland
Ama-ATM ajwayelekile eSwitzerland futhi amakhadi wesikweletu amukelwa kabanzi (yize ezinye izitolo zingakhokhisa intengo engu-3%, kanti amatekisi akhuphuka i-15%).
Amadokodo wokushintshana ngemali atholakala kuzo zonke izinxanxathela zezitolo futhi ngokuvamile anikela ngamanani angcono, amahora okuvula angcono kanye nensizakalo eshesha kakhulu kunasemabhange.
ISingapore ibiza kakhulu ngamazinga ase-Asia kodwa ayibizi uma uyiqhathanisa namanye amazwe athuthukile.
Ukudla ikakhulukazi ukweba, nokudla okuhle kakhulu kwe-hawker okutholakala ngaphansi kwe- $ 5 yokusebenzela ngokukhululeka. Indawo yokuhlala yindawo encane.
Ubusuku bokuphila baseSingapore bukhule bobabili ngokudlidliza nokuhlukahluka eminyakeni edlule. Amanye amaklabhu anamalayisense we-24 hr nezindawo ezimbalwa ezisondele ngaphambi kwe-3AM. Noma imuphi umculi ovakashela i-Asia uqinisekiswe kakhulu ukumisa eSingapore. Ubusuku bokuphila baseSingapore bugxile kakhulu eceleni kwama-Quays amathathu - iBoat, Clarke neRoberton - yaseRiverside, kanye namakilabhu aseSentosa naseSt James Power Station esiseduze anikeza izilwane zephathi isizathu esengeziwe sokudansa ubusuku kude. Iminyaka yobudala yokuphuza yi-18, futhi ngenkathi lokhu kusebenza ngokunamandla, amanye amakilabhu anemikhawulo yobudala ephakeme.
NgoLwesihlanu kuvame ukuthi kube ngobusuku obukhulu kakhulu ngesonto ukuphuma, bese kuthi uMgqibelo ube ngowesibili. ULwesithathu noma uLwesine kuwusuku lwabesifazane, ngokuvamile okusho hhayi ukungena nje kwamahhala kepha iziphuzo zamahhala zabesifazane. Amakilabhu amaningi avalwa ngoMsombuluko nangoLwesibili, kanti imigoqo ngokuvamile ihlala ivulekile kepha ithambekele ethule kakhulu.
Utshwala buyatholakala kabanzi kepha kubiza kakhulu ngenxa yentela yesono esindayo yaseSingapore. Ungaletha ilitha elilodwa lotshwala namalitha amabili ewayini nobhiya uma ufika uvela kwamanye amazwe ngaphandle kweMalaysia. Isikhumulo sezindiza iChangi sinezindawo ezinhle zemimoya yamahhala ngamanani afanele.
I-Alcohol yi-haram (inqatshelwe) kumaSulumane, futhi iningi lamaSulumane amaSulumane ayakugwema lokho. Ngenkathi iningi lamaSpanish lingewona amaSulumane lingewona ama-puritan futhi lijabulela isiphuzo njalo nangezikhathi ezithile, ungalindeli ukuthola isiko lokuzitika ngotshwala elizokuthola emazweni amaningi aseNtshonalanga. Ngokungafani emazweni amaningi aseNtshonalanga, ukudakwa komphakathi eqoqweni lezenhlalo e-Singapore, futhi ukuzilawula ngaphansi kwethonya lotshwala ngokuqinisekile ngeke kukutholele inhlonipho evela kubangane baseSoviet. Ungavumeli noma yiziphi izingxabano ukuthi zikhuphuke zilwe, njengoba kuzobizwa amaphoyisa, futhi uzobhekana nesikhathi sasejele futhi mhlawumbe ungaxoshwa.
Izivakashi zithutheleka eLong Bar eRaffles Hotel ukuyosampula iSling Sling yasekuqaleni, inhlanganisela epinki egulayo yejusi likaphayinaphu, i-gin nokuningi, kepha abantu bendawo (abacishe) bangazithinti izinto. Isisekelo sokukhetha eSwitzerland ubhiya wasendaweni, iTiger, indawo yokulala ejwayelekile, kepha kuye kwaba nokuthambekela okusha kwe-RedDot Brewhouse (Dempsey & Boat Quay), e-Archipelago, eBrewerkz (eRiverside Point, eStandard Indoor Stadium, Orchard IParade Hotel, neSentosa Boardwalk), uPaulaner Brauhaus (Millenia Walk) kanye neGumbi Lamagumbi (Clarke Quay) bonke banikeza ezinye izindlela ezithokozisayo.
Ugwayi wentela kakhulu, futhi awuvunyelwe ukuthi ulethe ngaphezulu kwepakethe elilodwa elivuliwe (hhayi ibhokisi, kodwa ipakethe elilodwa!) Kagwayi ezweni. Lokhu kusebenza kakhulu emingceleni yomhlaba neMalaysia. Izindawo eziningi zomphakathi kubandakanya izikhungo zama-hawker zinemikhawulo ekubhemeni, futhi kuyenqatshelwe ezokuthutha zomphakathi. Kuvinjelwe ngokuphelele ukubhema kuzo zonke izindawo ezinomoya (kufaka phakathi ama-pubs nama-discos), kanye nemikhawulo eqinile lapho ungabhema khona futhi (isb, iziteshi zamabhasi, amapaki, izinkundla zokudlala nazo zonke ngaphandle kwezingxenye ezibekiwe zezikhungo ze-hawker imingcele). Indawo ebekiwe kufanele imakwe ngohlaka oluphuzi, futhi ingaba nendawo yokufunda “indawo yokubhema”.
ISingapore iphatha kabi kakhulu izidakamizwa. Isigwebo sentambo siyimpoqo kulabo abatholakala benamacala okushushumbisa, ukukhiqiza, ukungenisa noma ukuthumela kwamanye amazwe ngaphezu kwe-15g ye-heroin, i-30g ye-morphine, i-30g ye-cocaine, i-500g ye-cannabis, i-200g ye-cannabis resin noma i-1.2kg ye-opium. lokho kuyadingeka ukuze ulahlwe yicala. Ukusetshenziswa okungagunyaziwe, kunenqwaba yejele leminyaka le-10 noma inhlawulo ye- $ 20,000, noma zombili. Ungakhokhiswa ngokusetshenziswa okungagunyaziwe inqobo nje uma kutholakala imishini yezidakamizwa ezingekho emthethweni ohlelweni lwakho, noma ngabe ungafakazela ukuthi zidliwe ngaphandle kwezwe, futhi ungabekwa icala lokushushumbisa inqobo nje uma izidakamizwa zitholakala emasakeni esesandleni sakho noma egumbini lakho lokulala, noma ngabe kungezona ezakho futhi kungakhathalekile ukuthi uyazazi - ngakhokho, qaphela izimpahla zakho.
Ubungqingili kanye nobungqingili bujeziswa iminyaka eyi-2 ejele, inhlawulo, ukuxoshwa, ukushaywa, ukwelashwa ngokwengqondo kanye nokuxebuka. Ukuhlaselwa kungenzeka kungaqhamuki futhi kungenzeka ukuthi amaphoyisa abe nozwela noma ahambisane. Azikho izivikelo zokulwa nobandlululo zesimo se-LGBT kanye nobudlelwano bobulili obufanayo abubonwa.
I-Singapore yenza isisekelo esihle sokuhlola i-South-East Asia, cishe nawo wonke amazwe akulesi sifunda nezindawo ezihamba phambili lapho izivakashi - Bangkok, I-Phuket, i-Angkor Wat, iHo Chi Minh City neBali, nje ukusho amagama ambalwa - ngaphansi kwe-2 hr kude ngendiza. Ukufika kwabathwali besabelomali ezikhathini zamuva nje kusho ukuthi iSingapore yindawo enhle yokubamba izindiza ezishibhile kuzo China kanye neNdiya, kanye naseSoutheast Asia eseningizimu. Ngaphezu kwalokho, iSingapore inezindiza eziqonda ngqo emadolobheni amancane aseMalaysia, Indonesia nase Thailand.
Ohambo losuku noma lwempelasonto olusuka eSingapore, okulandelayo kuyathandwa:
IBatam - isiqhingi esiseduze sase-Indonesia ukuya eSingapore, uhambo nje olude lwesikebhe. Ezimboni ikakhulu futhi ezidume ngokuhweba okubi, kepha kunezindawo zokungcebeleka ezithile.
I-Bintan - Isiqhingi sase-Indonesia esiseduze nemizuzu eyi-55 ngesikebhe, enikeza izindawo zokugcina eziphezulu kanye nesipiliyoni se "Indonesia yangempela".
UJohor Bahru - idolobha laseMalaysian ngaphesheya kweCauseway. Vele imizuzu engu-20 ngebhasi i-950 usuka eWoodlands Bus Interchange. Hhayi okuningi okufanele ubheke, kepha kuthandwa ngokudla okushibhile nokuthenga.
Kuala Lumpur - Inhlokodolobha yaseMalawi esebenzayo. I-35min ngendiza, i-4-5h ngebhasi noma ubusuku bonke ngesitimela.
IMalacca - Wake waba munye wamaThempeli amathathu, manje oseyidolobha elinamakholoni abalele. I-3-4h ngebhasi.
I-Tioman - eseduzane neziqhingi zaseparadesi zaseMalawi's East Coast, ezifinyeleleka ngebhasi nangesikebhe noma ngendiza.
Kulabo abangakwazi ukuthola isikhathi esithe xaxa sokuhamba, nazi izindawo ezimbalwa ezithandwa kakhulu ngabaseSoviet:
Bali - Omunye wabavakashi abakhulu base-Indonesia udonsa ngamabhishi awo amahle nokudla okuhle. Cishe i-2.5h ngendiza.
Bangkok , I-Thailand's caI-pital futhi yathatha njengokudla, ukuyothenga kanye nokudla kwe-paradesi ngabantu baseSingapore abaningi. Kungaphansi kwendiza i-2h ukuhamba ebusuku noma ubusuku be-2 ngesitimela, ucabanga ukuthi awuzukuma eKuala Lumpur noma eButterworth (ePenang).
Phuket - Esinye seziqhingi ezinkulu kunazo zonke eThailand, kungenye indawo edumile yabaseSingapore. Inikeza ukuthola okuhle ngempelasonto futhi ingaphansi kwamahora amabili indiza ibaleka. Ngokushibhile kuneSingapore, indawo enhle yokulenga lapho.
I-Ipoh - inhloko-dolobha yezwe laseMalawi iPerak, idumile phakathi kwabantu baseSingapore ngokudla kwayo. I-7-8h kude nomqeqeshi, noma ihora le-1 ngendiza ye-turboprop.
ILangkawi - isiqhingi esisesifundeni saseMalaysia iKedah, eseningizimu yomngcele waseThailand, odume ngamabhishi angapheli. Ngaphezulu kwe-1h ngendiza.
IPenang - Enye yezindawo zokuhlala ama-Straits, enomlando ocebile nokudla okumnandi. Cishe i-12h kude nomqeqeshi, noma i-1h uma ukhetha ukundiza. Idume ngokuvakasha kwayo kwezokwelapha.